Kodzero-dzevanhu, 07 Zvita 2017
China 7 Zvita 2017
Zvita 07, 2017
VaChinamasa Vanotura Bhajeti ra2018 Muparamende
Gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vatura muparamende bhajeti ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora vachiti vanotarisira kuti hupfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouuya.
Vatambi veBhora Votsvaka Mafuro Manyora kuSouth Africa
Vatambi vakawanda vane mukurumbira munyika vari munzira kuenda kuzvikwata zvekuSouth Africa vachitiza mari shoma shoma yemuhoro iyo vanotambiriswa nezvikwata zvemuno.
VaChombo Vofurwa neMhepo Zvichitevera Kupihwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Mutongi wedare repamusoro remuHarare nhasi aisa gweta rehurumende parumananzombe nenyaya yekuti vaimbova gurukota rezvemari VaIgnatius Chombo vakanga vamiswa pamberi pedare zviri pamutemo here kana kuti kwete.
Mapato Anopikisa Anoti Achakasimba Kukwikwidzana neZanu PF
Mapato anopikisa emunyika anoti achakasimba sezvaaive akaita hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe isati yapidigurwa nemauto, izvo zvakazosimudza VaEmmerson Mnangagwa kukwira kuve mutungamiri wenyika.
VaJim Kunaka veZanu PF Votyira Hupenyu Hwavo
VaKunaka vanoti pakasvika varume ava, ivo vakanga vasiri pamba pavo izvo zvakazoita kuti varume ava varove zvakaipisisa mudzimai wavo, pamwe nekuparadza midziyo yavo.
Muchuchisi Munyaya yaVaChombo Ooneswa Chitsvuku neMutongi weDare rePamusoro
Zvita 06, 2017
ZPP: Mapurisa Aityora Kodzero Zvikuru Mauto Asati Apindira
Sangano re Zimbabwe Peace Project, ZPP, rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kwakadzikira mumwedzi wa Mbudzi, panguva iyo kurwisana mubato reZanuPF kwaitsviriridza.
Nyaya yeMauto Ari Mumigwagwa Yotaurwa Muparamende
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDC – T mudare reNational Assembly, VaInnocent Gonese, vaudza dare kupinda mumigwagwa kwemauto achishanda nemapurisa kuri kuitika pari zvino kunogona kunge kuri kunze kwemutemo.
Va Timothy Stamps Vanoitwa Gamba reNyika
Asi hama dzaVaStamps dzakaramba kuti vavigwe panovigwa magamba enyika kuNational Heroes Acre dzichiti dzinoda kutevedzera tsika yadzo yekuviga munhu kuburikidza nekumupisa muviri wake ozoradzikwa ava madota.
Vari Kunze Vokurudzirwa Kushandisa Mukana Wamuka Kumusha
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirana kutanga mabhizimusi kumusha zvichitevera kushanduka kwehutungamiri muhurumende.
MDC Alliance Inoti Vanhu Ngavazive Bato Rakauraya Nyika
Mutauriri weMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube, VaKurauone Chihwai,vakati kuenda kwaVaMugabe hakufaniri kudzorera kumashure hondo yekuunza hutongi hwejekekere munyika.
Nyaya Dziri Kupomerwa VaChombo naVaChipanga Dzinotadza Kunzwikwa neDare
Dare repamusoro raratidza kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende kuti nyaya dzakakwidzwa kudare repamusoro nevaimbova gurukota rezvemari, VaIgnatius Chombo, pamwe nevaimbova mutungamiri wevechidiki muZanu PF, VaKudzanai Chipanga, dzinzwikwe.
Vagari veMuChinhoyi Vofarira Kugadzirwa kweMigawagwa
Vakawanda Munyika Voshushikana neMoto Yoparadza Zvinhu Munzvimbo Dzakasiya Siyana
VaChamisa naVaBiti Vonyorera Tsamba Kukomisheni yaVaMothlante Iri Kuongorora Kuurayiwa kweVanhu muHarare
Gurukota reZvemari VaMthuli Ncube Votarisira Kuparura Bhajeti Richabatsira Veruzhinji
Imwe Kambani yeMugodhi Yodzinga Vashandi Mudzimba kuBindura